Infographic: Workkpụrụ Ọrụ Ekwentị
Fraịde, Ọgọstụ 12, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Adam Obere
Njikwa kọntaktị mmekọrịta Aka (nke RIM nwetara n'oge na-adịbeghị anya) tinyekwara ihe omuma ihe omuma a na Mobile Workstyle. N'adịghị ka Dell Infographic na ndị ọrụ mkpanaka Ihe omuma ihe omuma a lekwasiri anya n'omume na ihe ndi choro nke onye oru aka ma obu ihe mere otu ulo oru kwesiri ichebara ichikota ndi oru ha. Dị ka:
65% nke ndị ọrụ mkpanaka jiri mbadamba
32% nke ndị ọrụ n'ụwa niile na-adabere ugbu a ihe karịrị otu ngwaọrụ mkpanaaka n'oge ụbọchị ọrụ.
Ọrụ ịnweta email mkpado gbagoro site na 36%
Ele ndị ọzọ ..
Teknụzụ ekwentị na-agbanwe ebe ọrụ. Kedu ka o siri gbanwee nke gị?